ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ Eurocham Myanmar, ILO နှင့် OECD တို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် Agrobusiness Forum 2020 သို့ တက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား – Agri Digit News
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ Eurocham Myanmar, ILO နှင့် OECD တို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် Agrobusiness Forum 2020 သို့ တက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား
Posted on Author adminComments Off on ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ Eurocham Myanmar, ILO နှင့် OECD တို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် Agrobusiness Forum 2020 သို့ တက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား
Eurocham Myanmar, ILO နှင့် OECD တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် Agrobusiness Forum 2020 ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဆွေလင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး H.E. Ranieri Sabatucci နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
လယ်ယာအခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် နှင့် တာဝန်ခံမှု ရှိသော ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ၊ ကွင်းဆက်တစ်လျှောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ချက်များ၊ အခွင့်အလမ်း များ ကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှု်ပနှံမှုတိုးမြှင့်ရေး၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းသော အစားအစာများထုတ်လုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတန်ဘိုးမြှင့် ထွက်ကုန်များ ကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုမှတဆင့် တင်ပို့နိုင်ခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု ကောင်းစွာ ရရှိ စေရန် အဆိုပါ ဖိုရမ်ကို ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖိုရမ်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ၌ COVID-19 ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှု ကြောင့် နိုင်ငံတိုင်းရှိစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိလာ ပြီး ကမ္ဘာ့ အလားအလာများ ပြောင်းလဲလာခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် နိုင်ငံတကာနှင့် အာဆီယံ စံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်သည့် GAP, GAQP, GAHP နှင့် GMP နှင့်အညီ အပြည့်အဝ ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော်လည်း ပိုမိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ COVID-19 ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ထိခိုက်မှုအား တုန့်ပြန်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ အသီးသီးမှ ရေရှည်ကောင်းမွန်သည့် အစီအစဉ်ချမှတ်ပြီး မြန်ဆန်စွာ တုန့်ပြန်နိုင်ရန် စီးပွားရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနှင့် အစိုးရတို့မှ ပူးပေါင်း ကြိုးပမ်း အားထုတ်သွားရန်လိုပါကြောင်း၊ မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနှင့် CERP အစီ အစဉ်အောက်မှာ မြန်မာငွေကျပ် ၉၂.၆၁ ဘီလီယံ သုံးစွဲ၍ စိုက်ပျိုးစီးပွား၊ အသေးစား စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် တောင်သူများအား ပံ့ပိုးရန်နှင့် ဆက်စပ်ကဏ္ဍများ နှင့် cash for work အစီအစဉ်တို့ကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ MERRP ၏ အောက်တွင် ဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတဆင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး မြှင့်တင် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ကျင်းပသည့်ဖိုရမ်တွင်အစား အစာလုံခြုံရေးနှင့် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးမှုရလဒ် များမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန် သော စိုက်ပျိုးရေးစနစ် တည်ဆောက်နိုင်ရေး တန်ဘိုးရှိသောအကြံပြုချက်များ ရရှိနိုင်လိမ့်မည် ဟုမျှော်လင့်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး H.E. Ranieri Sabatucci က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် လယ်ယာကဏ္ဍတွင် တာဝန်ခံမှုရှိသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အနေဖြင့် လိုအပ်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ခိုင်မာသောမူဝါဒများ ချမှတ်ရန် လိုအပ် ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် လယ်ယာကဏ္ဍအသွင်ကူးပြောင်းရေးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့်အတူ တာဝန်ခံမှု ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အကူအညီများနှင့် စံချိန်စံညွှန်း ပြည့်မီ သော၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော လယ်ယာထွက်ကုန်များကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် သာမက ပြည်ပတင်ပို့နိုင်ရေးကိုပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥရောပ ကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ရှိသည့် ပျားရည်ကို ဥရောပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့နိုင်ရေး ၂၉-၇-၂၀၂၀ ရက်တွင် တင်သွင်းခွင့် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ လယ်ယာနှင့် စားသောက်ကုန်များ EU ဈေးကွက်သို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အစားအစာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီရေး၊ အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန် ပိုးမွှားရောဂါ ကင်းစင်ရေးတို့ကို ပိုမိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါ ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ EU၊ ILO ၊ OECD စသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လယ်သမားများ၊ ပြည်သူများ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာကဏ္ဍ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ် ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဆွေလင်း က Plenary Session တွင် “Taking Stock of 2020 to Unlock Myanmar’s Potential” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် COVID-19 ကြောင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း စိုက်ပျိုးစီးပွားကဏ္ဍရှိ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် လယ်ယာကဏ္ဍအသွင်ပြောင်းလဲ ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ပါဝင်ဆွေးနွေးသည်။
ဖိုရမ်သို့ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဥရောပ ကုန်သည် ကြီးများအသင်း (Eurocham Myanmar), အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖွဲ့ (Organization For Economic Cooperation and Development-OECD), အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ (International Labour Organization-ILO) နှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၁၃၀) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိကျရောက်လျက်ရှိသောနှံကောင် သိပ္ပံအမည် Aularches miliaris (Linnaeus, 1758) ဟုခေါ်တွင်သော အဝါစက်ပြောက်နှံကောင် (သို့) ကော်ဖီ နှံကောင်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံများတွင် ကျရောက်လျက်ရှိသော ကန္တာရ ကျိုင်းကောင်အမျိုးအစားမဟုတ်ပါ။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လအတွင်းစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်၊ (သဖန်းဆိပ်ကျေးရွာ)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ် (မော်ရုံကျေးရွာ) နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေကြည်မြို့နယ် (ဝက်ရုပ်ကျေးရွာ) တို့တွင် ကျရောက်လျက် ရှိပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် ၏ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်သူများအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်ကြီး သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၏ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး အခြေခံသော ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်စဉ် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ရုံးခန်းမ ၌ ရှမ်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာကျော်ထွန်း နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ အား သွားရောက်တွေ့ဆုံ၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဒေသအာဏာပိုင်များအကြား စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ နှင့် တောင်သူပညာပေးလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ၊ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုအခြေခံသည့် စက်မှုကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်းက တိုးတက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက် ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆည်-ရေကဏ္ဍ လယ်ယာကဏ္ဍ သတင်းကဏ္ဍ ဦးစီးဌာနသတင်းများ
ရေလှောင်တမံနှင့် ရေဘေး ကာကွယ်ရေး တာများအား အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြိုတင် စီမံခန့်ခွဲမှု စီမံချက် လုပ်ငန်းစဉ်များ အတိုင်း ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ရန် ဆည်/ရေ ဦးစီးဌာန က ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်
မှိုသီးနှံမြန်မာ GAP Guideline ရေးဆွဲရေး နှင့် စိုက်ပျိုးမှု ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်း
စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် (၉၆)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် နှစ်ထပ်စာသင်ဆောင် (၂)ဆောင် နှင့် ဌာနသစ်(၄)ခု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း